Abavelisi bokucoca umoya - iFektri yokuCoca uMoya kunye nabaxhasi
Inkqubo yoNyango ye-VOC
Igumbi lokucoca i-GMP
Iiyunithi zokuphatha umoya
Igumbi elicocekileyo lokuPhatha umoya
ICandelo lokuPhatha umoya
ICandelo lokuPhatha umoya omtsha
Iiyunithi zokuphatha umoya woshishino
Inkqubo yeCandelo le-HVAC elicocekileyo
Umchamo womoya we-ICT
Abatshintshi bobushushu boMoya
Ubushushu Pump Ubushushu Indawo yokubuyisela umoya
Iiprojekthi Case Study
Iiyunithi ezidibeneyo zokuphatha umoya
Ukucoca umoya ngeDisinfec ...
Umlomo Glass Wool Sandwich P ...
EZIIMODYULI Air-zipholile Skrolela C ...
CVE Series abasisigxina Magnet ...
Isihlambululi soMoya esisebenza ngeNtsholongwane
Ukuqhekeza itekhnoloji yomoya uhlobo lokucoca ukubulala iintsholongwane ukuya kuthi ga kwi-99.9%. Ixabiso lokuHanjiswa koMoya ococekileyo (i-CADR): 480m3 / h, ilungele indawo engama-40-60m2. Ukususa ngokufanelekileyo ivumba kunye nokucoca i-PM2.5, inkungu, umungu, uthuli, ii-VOCs. Isicoci somoya sivavanyiwe kwiziko lokufumanisa i-microbiology. Izinga lokubulala intsholongwane ye-H1N1 kunye ne-H3N2 virus limalunga ne-99.9%.
Iindlela eziNye eziCoca iiNkqubo zokuHanjiswa komoya
Umgangatho womoya oGqwesileyo wasendlwini, uMgangatho oPhezulu we-Oxygen Indlela enye yendlela yokucoca umoya ococekileyo unikezela umoya omtsha ongaphandle kwigumbi lokucoca okuphezulu. Ixhotywe ngeefilitha eziphindwe kabini ngenqanaba lokuhluza le-PM2.5 ngaphezulu kwe-95%. Ingasetyenziselwa ukusebenza kunye neHoltop yokuphucula amandla omoya yokuphucula ukucoca umoya nokuba isetyenziswe ngokuzimeleyo ekucoceni umoya kwinkqubo yomoya. Inemisebenzi yokuzikhethela yokujikeleza kwangaphakathi. Kwimeko xa ingakulungelanga ...
Ibhokisi entsha yentsholongwane yomoya yeHVAC
Iimpawu zeNkqubo yeBhokisi yoMoya oCoca ngokuBulala iintsholongwane
(1) Ukungasebenzi kakuhle
Yibulale intsholongwane emoyeni ngexesha elifutshane, ukunciphisa kakhulu ukusasazeka kwentsholongwane.
(2) Inyathelo elipheleleyo
Iintlobo ngeentlobo ze-ion zokucoca ziveliswa kwaye zikhutshelwa kwindawo yonke, kwaye izinto ezingcolisayo ezinobungozi ezahlukeneyo zibolile ngokukuko, ezifanelekileyo nezipheleleyo.
(3) Ungcoliseko lweZero
Akukho ungcoliseko lwesibini kunye nengxolo zero.
(4) ezinokuthenjwa kwaye zilungele
(5) kwizinga eliphezulu, ufakelo lula kunye nokugcinwa
Isicelo: indlu yokuhlala, iofisi encinci, i-kindergarten, isikolo nezinye iindawo.
Ukusukela ngo-2007, iAirwoods ezinikele ukubonelela nge-hvac ebanzi, igumbi elicocekileyo kunye nezisombululo zonyango lwe-VOC kumashishini ahlukeneyo. Sijonge ukuhambisa umgangatho wokwakha umoya kwihlabathi kunye neemveliso ezonga amandla, izisombululo ezilungiselelwe, amaxabiso angabizi mali kunye neenkonzo ezintle.
Igumbi 2101, iZiko eliKomkhulu loKwakha uNombolo 25, iTian An Hi-Tech Ecological Park, No. 555 Panyu Ave, Isithili sasePanyu, eGuangzhou, China